Ciidan cusub oo amniga Muqdisho loo qorsheeyay – Bandhiga
Ciidan cusub oo amniga Muqdisho loo qorsheeyay
Ciidamo katirsan Booliska Soomaaliyeed oo booqasho dhiiro gelin ah ka helay Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre kuwaa oo maraya heerarkii ugu dambeeyay ee tababarada ciidanka ayaa loo diyaariyay in ay sugaan amniga magaalaada Muqdisho.
Ra’isul wasaaraha ayaa Mudane mid mid u weydiiyay Ciidamada Xaaladdooda Nolaleed iyo mid Tababar intaba, isagoo warbixinno ka dhageystay macalimiinta tabarka siinaya ciidankan loo diyaarinayo sugidda Amniga.
Mudane Kheyre ayaa sidoo kale kormeer ku soo maray xarunta Dugsiga tababarka Janaraal Kaahiye, isagoo u mahad-celiyay Macalimiintii tababarka bixinayay
Waxaana saraakiisha halkaasi ka hadashay ay sheegeen in ay jiraan Ciidamo u xareysan sugidda Amniga Caasimadda oo dhawaan lagu wado in ay soo qalin-jabiyaan kuwaa oo la wareegi doona Amniga, lagana rajeynayo in isbadal weyn ay ku sameeyaan.
Al shabaab oo dagaal kula wareegay deegaano dhaca gobalka Mudug
Maxaa keenay guul darrada deg dega ah ee ku habsatay Tigreyga?
Walaac xoog leh oo laga muujiyay hadallada kulul ee siyaasiyiinta Soomaalida hawada isu mariyeen